Ungawana Sei Shamwari Dzechokwadi?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
Kufambira mberi kuri kuita zvinhu zvinoshandiswa pakukurukura kuri kuita kuti ukwanise kutaura nevanhu vakawanda kupfuura zvaiitwa kare. Kunyange zvakadaro, unganzwa sekuti ushamwari hwauinahwo hahuna kunyatsosimba. Mumwe mukomana akataura nezvazvo achiti: “Ndinonzwa sekuti ndinogona kungomuka ndisisina wekushamwaridzana naye. Asi baba vangu vachiri kushamwaridzana nevanhu vavakatanga kushamwaridzana navo kare kare!”
Mazuva ano, chii chiri kuita kuti zviomere vanhu kuramba vaine ushamwari hwakasimba nevamwe?
Zvinhu zvinoshandiswa pakukurukura ndizvo zvimwe zviri kukonzera kuti zvidaro. Kutumirana mameseji uye kukurukura paIndaneti kwava kuita kuti zvive nyore kuti vanhu vashamwaridzane vasingaonani. Vanhu havachanyatsokurukuri nyaya dzine musoro asi vava kungoswera vachitumirana-tumirana tumameseji. Bhuku rinonzi Artificial Maturity rinoti: “Vanhu havachagari pasi vachikurukura. Vana vechikoro vava kuitawo nguva yakareba vari pamafoni nepamakombiyuta zvokuti havasisina nguva yekuti vakurukure nevamwe.”
Dzimwe nguva kukurukura paIndaneti kunogona kuita kuti uone sekuti une ushamwari hwakasimba nemumwe munhu. Brian, * ane makore 22, anoti: “Mazuva achangopfuura ndakaona kuti ndini ndaingogara ndichitanga kutumira shamwari dzangu mameseji. Ndakazorega kuvatumira mameseji ndichida kuona kuti vangani vaizotangawo kutaura neni. Zvakandishamisa kuti vashomanana chete ndivo vakadaro. Ndakatozoona kuti vamwe vandaiti ishamwari dzangu vakanga vasiri shamwari dzepedyo.”
Asi kutumira mameseji uye kukurukura paIndaneti hakubatsiri here kuti ugare uchiziva zviri kuitika kune vamwe kuitira kuti musimbise ushamwari hwenyu? Kunobatsira, kunyanya kana muchiwanawo mukana wekukurukura muchionana kwete zvemameseji chete. Asi nzvimbo dzekukurukura paIndaneti dzinowanzoita kuti vanhu vangozivana asi hadziiti kuti vanhu vave neushamwari hwakasimba.
Ziva kuti ushamwari hwechokwadi hwakaita sei. Bhaibheri rinotsanangura kuti “shamwari inonamatira kupfuura mukoma.” (Zvirevo 18:24) Ndiyo shamwari yaunoda here? Ko iwe uri shamwari yakadaro here? Kuti ukwanise kupindura mibvunzo iyi, nyora zvinhu zvitatu zvaunotarisira kuti zviitwe neshamwari yako. Chinyora zvinhu zvitatu zvaungaitawo seshamwari. Zvibvunze kuti: ‘Pavanhu vandinotaura navo paIndaneti, ndevapi vanoita zvinhu zvandinotarisira kuti zviitwe neshamwari? Ko ini ndine zvandiri kuitawo here pakusimbisa ushamwari hwedu?’—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaFiripi 2:4.
Ziva zvinhu zvinokosha. Vanhu vanowanzoshamwaridzana paIndaneti kana vakaona kuti pane zvinhu zvakafanana zvinovanakidza zvakadai semitambo. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti vafarire zvinhu zvinobatsira kwete zvinhu zvinongovanakidza chete. Leanne, ane makore 21, anoti: “Handina hangu shamwari dzakawanda, asi shamwari dzandiinadzo dzinondibatsira kuti ndive munhu kwaye.”—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 13:20.
Tsvaga shamwari dzokuti munokurukura muchionana. Hapana chinokunda kutaura neshamwari dzako makatarisana, uchikwanisa kunyatsonzwa matauriro aari kuita, zvaanoita pachiso uye muviri wake.—Zvinotaurwa neBhaibheri: 1 VaTesaronika 2:17.
Nyora tsamba. Kunyange zvazvo kunyora tsamba kuchiita kunge kwechinyakare, kunoratidza kuti uri kunyatsofunga nezvemunhu wauri kunyorera. Izvi hazvichanyanyi kuitika mazuva ano sezvo vanhu vava kugara vakabatikana. Somuenzaniso, mubhuku rinonzi Alone Together, Sherry Turkle akanyora nezvemumwe mukomana akataura kuti haatomboyeuki achinyorerwa tsamba. Achitaura nezvemakore ainyorwa tsamba, mukomana wacho anoti: “Kunyange zvazvo ndakanga ndisati ndazvarwa, ndinoshuva kuti dai ndakararama makore iwayo.” Wadii kushandisawo nzira iyi pakukurukura neshamwari dzako?
Zvinonyanya kukosha: Kungogara muchitaura mese handiko chete kunoratidza kuti munhu ishamwari yechokwadi. Munofanira kuva nerudo, kunzwirana tsitsi, kuva nemwoyo murefu, uye kukanganwirana. Zvinhu izvi ndizvo zvinoita kuti muve neushamwari hwakasimba. Asi haukwanisi kuita izvi neshamwari dzako kana muchingokurukura paIndaneti chete.
“Musingarambi muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi muchiva nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.”—VaFiripi 2:4.
“Takavavarira kwazvo kuona zviso zvenyu.”—1 VaTesaronika 2:17.
“Kana takasurukirwa tinoda kutaura nemumwe munhu. Shamwari ndidzo dzinonyatsotinzwisisa uye dzinotibatsira kuti tinzwe zviri nani. Dzinofara nesu uye dzinotibatsira kana tiri mumatambudziko.”
“Pandaiva muduku, ndaisada zvekutaura-taura uye ndaisava nechido chekutsvaga shamwari. Izvi zvakaita kuti ndisanakidzwe neupenyu. Ndakazoshanda nesimba kuti ndive neushamwari nevamwe. Zvinokosha kuti uve neshamwari dzinokwanisa kukubatsira mukufara nemukusuwa.”